Oge Njem Oge Ezumike Na-amalite: Nkpuchi ihu, Akwụkwọ na elybịa Bịara Oge Dị Mkpa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany » Oge Njem Oge Ezumike Na-amalite: Nkpuchi ihu, Akwụkwọ na elybịa Bịara Oge Dị Mkpa
Airport • Na -agbasa Akụkọ Europe • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • News • ndị mmadụ • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Air njem n'oge okpomọkụ 2021 kwesịrị ka a hazie ya nke ọma. Ọdụ ụgbọ elu Frankfurt na-akpọ maka nkwado maka ndị njem.
Ọtụtụ ndị na-atụsi anya ike ịtụte atụmatụ njem ha. Ochicho maka ugbo elu, karisia, na-eto. Ka oge njem oge ọkọchị bidoro, Ọdụ ụgbọ elu Frankfurt dị na Germany na-atụ anya ịrị elu dị elu na ọnụ ọgụgụ ndị njem ma na-atụ anya ịnabata ụfọdụ ndị njem 100,000 kwa ụbọchị.
N'iji ya tụnyere, n'oge ọkọchị nke 2019 - tupu mmalite nke ọrịa a - ọnụ ọgụgụ kachasị elu kwa ụbọchị karịrị 240,000.
Fraport, ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ n'ọdụ ụgbọ elu Frankfurt, emeghachila ngwa ngwa na mgbapụta ahụ ma meghee Terminal 2 iji zere igwe mmadụ. Usoro mgbochi ịrịa ọrịa, dịka iwu mkpuchi ihu na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ka nọ. Agbanyeghị, ndị njem ga-arụ ọrụ ha site na ịhazi nke ọma maka njem ha, yana ịnwe akwụkwọ ziri ezi niile.
Daniela Weiss nke otu ndị na-ahụ maka njikwa ọdụ ụgbọ Fraport na-akọwa, sị: “Ọbụna tupu ọrịa a efe efe, njem ụgbọelu gụnyere iwu dị iche iche - ndị ahụ ka dị taa. Ma Covid-19 ahụwo mgbanwe n’ọtụtụ usoro, ụfọdụ na-ewekwa oge dị ukwuu n’ihi ya. ” Weiss kọwara na, n'agbanyeghị ọnụ ọgụgụ dị nnọọ ala ma e jiri ya tụnyere afọ ndị gara aga, ndị njem ahụ nwere ike iwepụtakwu oge iji kwụ n'ahịrị: “Ma site n'ime nkwadebe ziri ezi, onye ọ bụla nwere ike inye aka ịnọgide na-eche na opekempe. Anyị chọrọ ka ndị njem gbasie ike ma nwee ahụ iru ala. ”
A gbara ndị njem ume ịlele weebụsaịtị nke ọdụ ụgbọ elu mgbe niile maka mmelite
"Isi ozi maka ndị njem n'oge okpomọkụ a bụ ịlele ntụzịaka enyere na ọdụ ọdụ ụgbọ elu anyị n'oge, na ugboro ugboro," ka Weiss na-adụ ọdụ. Iji dabara na-eru nso elu oge, www.frankfurt-airport.com nwere ihe ohuru: Ndi njem njem. Nke a na - edozigharị ozi niile dị mkpa n’otu ebe. Ọ na-enye ndụmọdụ, ndụmọdụ, na iwu ndị doro anya n'usoro usoro oge, nke kwekọrọ n'usoro usoro nke njem onye njem - site na usoro izizi mbụ, ruo ngwongwo ebido, ịhazi njem gaa n'ọdụ ụgbọ elu, ịkwadebe maka njem nlọghachi. Dika onye njikwa ya kwuru, ntuziaka di otutu ma, n'ihi oria ojoo a, ma odi nkpa ma bara uru. Ọ na-ekwusi ike, sị: “Ọtụtụ iwu nwere ike ịgbanwe n'oge na-adịghị anya. N’afọ a, a na-adụ onye ọ bụla ọdụ ka ịlele maka mmelite oge niile: Gịnị ka m kwesịrị ime? Kedu akwụkwọ m chọrọ? Olee otú m ga-esi na-akpa àgwà? Azịza ha nwere ike ịdị iche na nke onye njem na nke ọzọ, dabere na atụmatụ njem ha kpọmkwem. ”
Akwụkwọ niile n'aka
Akụkụ bụ isi bụ akwụkwọ njem. Maka ọtụtụ ebe, naanị paspọtụ ma ọ bụ kaadị ID agaghị ezu. Dabere na ọnọdụ ahụike nke onwe ha, ndị njem nwere ike ịchọ ihe akaebe nke ọgwụ mgbochi, mgbake, ule ma ọ bụ iche - na ederede ma ọ bụ na kọmputa. "A ga-ewepụta ọtụtụ akwụkwọ n'ọtụtụ oge, ya mere ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya ịhazi ihe niile nke ọma ma dịkwa mfe maka ezinụlọ niile," ka Weiss na-ekwusi ike. Nke a dị mkpa karịsịa maka nbanye na njikwa ókè. Ọtụtụ mba na-enyekwa iwu tupu ịdebanye aha tupu ịbanye. Nke a nwere ike na-agwụ agwụ digitally.
Jide n'aka nri, ma wedata ibu ibu gị
Dị ka Weiss si mee ka ọ pụta ìhè: "Na mgbakwunye na ihe ọhụrụ Covid-19 chọrọ, iwu ndị na-ebu ibu na-adị ugbu a ka na-emetụta ma ghara ichefu ya." N'okwu a, onye enyemaka na njem ntanetị nwere ike inyere aka. Enwere iwu pụrụ iche maka ọtụtụ ihe, gụnyere mmiri mmiri, ọgwụ, ihe nhicha aka, ngwongwo dị egwu, ngwa elektrọnik - ọkachasị ngwugwu batrị, e-sịga na ụlọ akụ ike. “Ọ bụ sayensị n'onwe ya. Ya mere, anyị na-atụ aro ka ndị njem gbaa mbọ hụ na ha matara nke ọma ihe ga-eme ka a zere ịtụnanya na igbu oge na nchekwa. Ọzọkwa: “Ìhè na-eme njem na-eme ka ihe dị mfe. Soro ntuziaka ụgbọelu gị banyere ibu ma debe ihe ndị ị na-ebu na nke kacha nta. Nke kachasị mma bụ otu ihe kwa mmadụ. Nke ahụ pụtara na nsogbu dịịrị gị na ndị ọrụ nchekwa. ”
Kwadebe njem gị na ọdụ ụgbọ elu na oge gị ebe ahụ
N'ihi ọrịa a, ọtụtụ ndị njem na-aga n'ọdụ ụgbọ elu kama iji ụgbọ njem ọha. Maka ndị chọrọ ịgbara ụgbọ ala ha ọdụ ụgbọ elu maka oge njem ha, ọ ga-adị mma itinye akwụkwọ na ebe ndọba ụgbọala tupu oge eruo. Nke a ga-ekwe omume n'ịntanetị na www.ogunyemi.frankfurt-airport.com. Ndị njem ga-abata na ọdụ ma ọ dịkarịa ala awa abụọ tupu ha apụ, ma lelee na ntanetị tupu ha ahapụ ụlọ.
Mgbe ị nọ n'ọdụ ụgbọ elu, a ga-eyi ihe mkpuchi ihu n'oge niile. Ọ ga-abụrịrị FFP2 ma ọ bụ mkpuchi ịwa ahụ, na-ekpuchi ọnụ na imi. Ihe ndị a na ngwaahịa ndị ọzọ dị ọcha dị na ọdụ ụgbọ elu niile. Ndị njem kwesịrị ịnwe ihe nkpuchi ihu abụọ ha.
Mfelata nke mgbochi coronavirus pụtara na ụlọ ahịa na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ amalitelarị ọzọ n'ọdụ ụgbọ elu Frankfurt. Ndị njem na ndị ọbịa nwere ike ijide n'aka na ngwaahịa na ọrụ niile dị mkpa, gụnyere nri na ihe ọ drinkụ drinkụ, ọgwụ na-ere ahịa, ịzụ ahịa na-akwụghị ụgwọ, ụgwọ ụgbọ ala na mgbanwe ego. Oge mmepe na nnweta ga-adabere na olu ndị njem. Onye ọ bụla na-achọ ihe a kapịrị ọnụ kwesịrị ịga na ebe nrụọrụ weebụ ọdụ ụgbọ elu maka nkọwa tupu ị rute. Ọ dị mkpa iburu n'uche na enwere ike iri nri na ihe ọ drinkụ drinkụ na ọdụ ụgbọ elu niile - mana na mkpuchi ihu ọ bụla ga-ewepụ obere oge, yana ndị ọzọ kwesịrị ịdebe ezigbo nchekwa.
“E kwesịrị iji nlezianya ndị ọzọ mee ihe iji gbochie ọrịa,” ka Weiss dọrọ aka ná ntị. “Anyị emejuputala ọtụtụ usoro, dị ka ihe nrịba akara anya gị, isi ihe nhicha aka, oche na mkpọchi. Ma, ọ bụ ọrụ dịịrị ndị njem anyị irube isi. ”
Nnwale dị na ọdụ ụgbọ elu niile
Ugbua enwere otutu uzo nyocha coronavirus na ọdụ ụgbọ elu Frankfurt. Ha dị na ọdụ abụọ ahụ, yana n'ọdụ ụgbọ ụkwụ na-aga n'okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè dị ogologo. Ọzọkwa, enwekwara nhọrọ nke ịnya ụgbọ-site na nyocha na nnabata na mbata ibu na Terminal 1 na mgbede tupu ụgbọ elu. Ọzọ, onye ntanetị na-ahụ maka njem n'ịntanetị nwere ike ịnye nkọwa ndị ọzọ. “Otú ọ dị, a ghaghị idetu ule ụfọdụ tupu oge eruo ma ị kwesịrị ịkwụ ụgwọ maka oge a chọrọ,” ka Weiss dọrọ aka ná ntị. O kwubiri, sị: “you gbasowo nduzi anyị niile? Mgbe ahụ njem ezumike ga-aga ebe ezumike gị na-echere. ”